अधिकांश अस्पताल आइतवार खुल्ने | आर्थिक अभियान
अधिकांश अस्पताल आइतवार खुल्ने
काठमाडौं । सरकारले दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन भए पनि उपत्यकाका अधिकांश ठूला अस्पताल आइतवार सञ्चालनमा आउने भएका छन् । लगातार दुई दिन बिदा हुँदा बिरामीलाई उपचारमा समस्या पर्ने बताउँदै ती अस्पताल आइतवार सञ्चालन हुन थालेका हुन् ।
उपत्यकाको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताललगायतका ठूला अस्पतालले बिरामीको उपचारलाई दृष्टिगत गर्दै आइतवार अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यसअघि जेठ १ गते आइतवारका दिनसमेत ती अस्पताल खुलेका थिए । तर, वीर अस्पतालले भने सरकारको दुई दिन बिदा दिने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै आइतवार बन्द गर्ने गरेको छ ।
सरकारले यही जेठ १ गतेदेखि शनिवार र आइतवार बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म कार्यालय समय बिहान ९:३० देखि अपराह्न ५:३० बजेसम्म तोकेको छ । वीर अस्पतालका निर्देशक डा भूपेन्द्र बस्नेतले सरकारले गरेको निर्णयानुसार नै अस्पताल आइतवार बिदा हुने बताए ।
‘सरकारको निर्णयानुसार हामी अस्पताल सञ्चालन गर्दछौं,’ उनले भने, ‘तर अस्पतालको आकस्मिक सेवा २४ घण्टा नै सञ्चालन भइरहेको छ । बहिरंग विभागमा त्यति गम्भीर बिरामी नआउने भएकाले आइतवार बन्द गर्ने निर्णय गरेका हौं ।’ कार्यालय समय बढेकाले बिरामीको उपचार गर्न सकिने तर्क उनको छ ।
यस्तै गंगालाल हृदयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बिरामीको उपचारलाई दृष्टिगत गर्दै आइतवार पनि अस्पताल खुल्ने बताए । उनका अनुसार केन्द्र स्वायत्त स्वास्थ्य संस्था भएकाले सरकारको निर्णय माने पनि बिरामीको उपचारलाई ख्याल गर्दै आइतवार पनि खुल्नेछ । उक्त केन्द्रमा दैनिक ६०० बिरामी उपचारका लागि आउने गर्दछन् ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. मनीषा थापाले सार्वजनिक बिदाका दिन आइतवार पनि बहिरंग सेवालगायत सम्पूर्ण सेवा नियमित सञ्चालन हुने बताइन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले पूर्ववत् अवस्थामा नै अस्पताल सञ्चालन भइरहने जानकारी दिए । रासस
पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिन निर्यात व्यवसायीले गरे माग [२०७९ असार, २१]